Kani waa astaanta cusub ee BMW ee loogu talagalay gaariga fikradda i4 | Abuurista khadka tooska ah
Shirkadda BMW ayaa soo bandhigtay astaan ​​cusub oo ku beegan soo bandhigista gaarigaaga fikradda i4 iyo wixii aan ka arki karno wuxuu si toos ah ugu socdaa naqshadaha midabbada barta leh. Sidaan soo sheegnay, sumad weyn oo qatar galinaysa, inkasta oo waqtiyada soo socda ay runta tahay inay cadaalad tahay.
Waqtiga markabka la badalayo, inkasta oo uu aad u gaabis yahay, dhanka waxa noqon kara korantada astaantan ayaa noqon karta wax ka badan inta la fahmi karo. Waqtiyada kale, fikradaha kale iyo astaamo kale oo muujinaya.
Waxay ka guureen astaantii asalka ahayd ee BMW leh dhalaalkaas iyo saddexdaas cabbir, si aad u qabsatid guriga iyadoon ilaawin midabka ugu badan ee cadaan iyo buluug ah astaanta cusub ee halista ah.
Mana aha mid looga tagay dardaaranka in qaab goobaabin Taasina waxay sii ahaaneysaa barta dhexe ee lagu aqoonsado astaanta sumaddan baabuur Jarmal ee caanka ah ee sumcadda adduunka laga aqoonsan yahay.
Waxa tan cusubi soo jeedinayso ayaa soo dhowaanaysa sidoo kale waqtiyada dhijitaalka ah in aan maanta nool nahay. Astaan ​​astaan ​​u ah in ka badan 103 sano oo taariikh ah iyo sida uu madaxweynaha astaanta iyo macmiilka BMW u leeyahay, waxaan la kulannaa sumad u guureysa xiriirka.
In si cad loo sii caddeeyaa waxay noqoneysaa mid furfuran oo cad. Waana in xitaa BMW ay ku darsatay astaan ​​cusub taariikhda calaamadaha maqaalkeeda taariikhdeeda. Karbaashka madow astaanta ka saar waa isbedelka ugu habboon; ciddiyaha noocyada leh xiisaha midabada.
Una soo jeedin xiiso leh iyo isbedel dabcan markay tahay astaantaada. Iyo waxyaabo badan oo loogu talagalay shirkadda ugu da'da weyn oo ay ku adag tahay in lagu neefsado hawada isbeddelka si loo taabto astaanteeda caanka ah ee la aqoonsan yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Marka noocyada waaweyni ay sidoo kale khatar geliyaan astaantooda: kiiska BMW
Habka mugdiga ahi wuxuu ku yimaadaa WhatsApp qaybtiisa ugu dambeysa ee ku saabsan Android iyo iOS